कुमारी आमा - भाग १ | Kamsastra
कुमारी आमा - भाग १
Sex, कुमारी आमा - भाग १, नेपाली यौन कथा,
जेठ महिनाको त्यो शनिबार , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यसमाथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको । त्यो उखुम गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं ।
एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ - त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्रममा भएका रहर लाग्दा योनिक्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएं । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको संमिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दैथियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै गर्दा ढोकाबाहिरबाट आमा कराउनु भयो , " ए ! सानी , आज त बाख्राहरु मरिसकेहोलान । जा जा पानी लगेर दे अनि सिँयालमा सारेर आईज । " मेरो एकाग्रतामा खलल पुर्याउंदा मलाई झनक्क रिस उठ्यो तर ‘कहाँ छन बाख्रा ?’ मैले सोधें । " खै कोनि त कहाँ छन ? बिहान लगेर कहाँ खुटेकि थिईस ? " आमाको जवाफले पो थाहा भयो बाख्राहरु त म आफैंले लगेर बिकाशहर्को खेतमा खुटाएर आकि थें । " लु जा झट्ट , मरिसकेहोलान बाख्राहरु त ।" आमाको आवाज क्रमश मधुरो हुंदै गयो सायद मेरो ढोकाबाट फर्किसक्नु हुंदैथियो । यो तातो घाममा बाख्राहरु भएको ठाउं सम्म पुग्नु पर्ने हुंदा मरे जतिकै लागेको थियो मलाई तर विकाशलाई त्यहाँ भेटिन सकिने संभावनाले मलाई जाँगरिलो बनायो । म सपनाबाट ब्युँझिए झैं उठें र यौटा तौलिया कम्मर मा बेह्रें यसो गर्दा पातलो म्याक्सीभित्रको मेरो बिना पेण्टीको योनिको आकार र योनिक्षेत्रका रौंहरु लुक्न सक्थ्यो । टाउकोमा सानो रुमाल राखेर घाम छेल्दै म बाल्टीभरी नुनपानी बोकेर बाख्राहरुलाई खुवाउन हिडें । बाख्राहरु भएसम्म पुग्नलाई खेतैखेत झण्डै २० मिनेट हिंड्नु पर्थ्यो । म बाटै भरी विकाशलाई सम्झंदै थिएं । हुनपनि अति साह्रै सोझो छ बिकाश । म प्रत्येक पटक उ संग नजिक पर्दा उसको स्पर्सको भोकी हुन्छु तर उसलाई भने केहि वास्तै छैन । मैले आँखाहरुले लाखौं पटक प्रेमको निवेदन हालीसकें तर विकाशले कहिल्यै बुझ्न सकेन । धेरै पटक एकान्तमा भेट हुंदा मैले जानी जानी स्तनहरु उसको कुम छाती तिर रगडेर प्रणयको खुल्ला निमन्त्रणा दिईसकें तर उसलाई कुनै असर हुंदैन । सानै देखि नदेखेको , नजानेको भए म विकाशमाथी यौनाङ्ग छैन कि भनेर शंका गर्न सक्थें तर सानोमा संगै खेल्दा हरेक पटक विकाश आफैं अघि सरेर लोग्नेको भुमिका निभाउंथ्यो भने मलाई स्वास्नीको भुमिका निभाउन बाध्य पार्थ्यो । हामी निर्धक्क भएर बाख्राका पाठापाठीहरु उक्लाउक्ली गरे झैं खेल्थ्यौं । भातपकाई ( भाँडाकुटी ) बाट शुरु हुने हाम्रो बालखेल संधै लोग्ने स्वास्नी भएर लोग्ने स्वास्नीको भुमिका निर्वाह गर्दै बच्चा ( झुम्राको ) जन्मिउञ्जेल सम्म खेल्ने गर्थ्यौं । सानोमा यस्ता सबै खेल खेल्न सिकाउने मेरो नायक आज कसरी यति धेरै सोझो भयो ? मनभरी बिकाशलाई बोकेर म एकसुरमा हिंड्दै गर्दा विकाशकै आवाजले म झस्किएं -’ ए! सानी , तिम्रो बाख्राहरु यहाँ ल्याईदिएको छु , पानी पनि ख्वाईदिएं है । ‘ म बाल्यकालको स्मृतीमा हराईरहेकोले होला एकपटक त विकाशले ए! सानी खेल्न आउ न भनेको जस्तो लाग्यो तर यथार्थमा विकाशले भनेको मैले बुझिहालें । गाउँ देखि निक्कै पर हम्मेसि मान्छेहरु आईनपुग्ने स्थानमा उसकै खेतको बिचमा भएको घना बाँसघारीको सिँयालमा उसका अनि मेरा पनि बाख्राहरु सारेर किताब पढ्दै बसिरहेको थियो विकाश । ढुंगो खोज्दा देउता मिल्यो भन्दै म उ भएनेर गएं । उ किताबमै मस्त थियो । बाल्टीको पानीले खुट्टामा लागेको धुलो पखाल्दै बोल्ने बहाना झिकें - ‘ कति पढ्छौ विकाश ? अल्छि लाग्दैन ? ‘ ‘ लाग्दैन है । ‘ किताबबाट नजर नहटाई सोझो जवाफ दियो उसले । ‘उफ कति साह्रो गर्मी । तिमीलाई गर्मी भएन ? ‘ मैले उसको ध्यान भंग गर्ने हेतुले कम्मरमा बाँधेको तौलिया खोलें । मलाई बिश्वास थियो यदि उसले हेर्यो भने मेरो पातलो म्याक्सी भित्र माथी छातीतिर आकाश छुने रहरले चुलिएका दुई टाकुराहरु र तलपट्टी अरुणको गल्छि अनि त्यहाँको बनस्पती जगत स्पष्ट देख्नेछ । म उसको नजिकै बस्नलाई तौलिया ओछ्याउने उपक्रममा लागें । उसले मलाई हेर्यो र तुरुन्तै भन्यो , ‘ छि ! तिमी त यत्री ठुलि भएर पनि कट्टु नलाएकि ? ‘ सरलपनाको पनि यौटा हद हुनु पर्ने हो तर मेरो योनि र त्यस वरीपरीका रौंहरु स्पष्ट देख्दा पनि उसमा कुनै उत्तेजना आएन क्यार । उसको नजर फेरी किताबमै अडियो । म तौलियामाथी उसको छेवैमा बसें र भनें ,’ तिमीलाई यो सुकेको झारले बिझाएन ? यो तौलियामा बसन ।’ बटन खुल्ला भएको मेरो म्याक्सीबाट बाहिर निस्कन खोज्दै गरेका दुबै स्तनहरुले विकाशलाई ल आउ खेलौं भन्ने अपिल गर्दैथिए । ‘ नाईँ अब म घर जान्छु , तिमी नै बस । ‘ किताब बन्द गरेर उठ्न खोज्दै थियो विकाश । मैले हत्तार उसको हात समातेर आफु तिर तानें म यौटा खुट्टा सिधा अगाडी तन्काएर र अर्को खुट्टा तेर्सो पारेर घुंडादेखि केहि खुम्च्याएर बसेकि थिएं । आधा उठिसकेको अवस्थाबाट सम्हालिन नपाउंदै विकाश मेरो काखमा मुख जोतेर लड्यो । उसको तिखो चुच्चो नाक म्याक्सी बाहिरबाटै मेरो योनिको माथ्लो भागमा धस्सिएको मिठो महसुस गरें मैले । सायद उसले पनि पहिलो पल्ट मेरो यौवनको मादक सुगन्धको अनिभुती गर्यो होला । उसले बिस्तारै टाउको उठाएर भन्यो - ‘ तिमीलाई त लाज शरम केहि छैन सानी । अब त हामी ठुला ठुला भै सक्यौं त । कहाँ सानोको जस्तो गरेको ? ‘ मैले विकाशको हात छोडेकै थिइनं । छोड्यो भने उ भाग्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । म विकाश संग सानोमा गरेका सबै कृयाकलापहरु दोहोर्याउन चाहन्थें । उसैले सानोको कुरा झिक्दा मलाई अझ अघि बढ्न सहज भयो र भनें - ‘ अनि के त ? सानोमा म अर्कै तिमी अर्कै थिईनौं त , सानोमा गर्न हुने अहिले गर्दा चैं के हुन्छ ? ‘ विकाशको अनुहार लाजले रातो भएको थियो । मेरो अनुहारमा पनि उत्तेजनाको लाली थियो होला । मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउने प्रयत्न गर्दै विकाशले भन्यो , ‘ सानोको जस्तै अहिले गर्दा तिमी सांच्चैको आमा भयौ भने नि ? अब त सानोको जस्तो झुम्राको नानी जन्मिदैन त ? ‘ ‘ जन्मे के त ? बिहे गरेर बसौंला नि । कि तिमी मलाई बिहे गर्दैनौ ? म त तिमी बाहेक अरु संग त मरे नि बिहे गर्दिन । तिमीलाई त मेरो मायापनि लाग्दैन कि के हो ? ‘ रिसाएको नखरा पार्दै मैले भनें । विकाश अवाक भएझैं मेरो आँखामा हेर्न लाग्यो । उसको अनुहारमात्र हैन कानहरु पनि राता राता भएका थिए । उ आगोको समिप परेको नौनी झैं पलपल पग्लिंदो थियो । लाजले रातो भएको उसको अनुहारमा क्रमश उत्तेजनाको रंग थपिंदै थियो । बिस्तारै उसले मेरो गालामा हात राखेर कपालका केश पन्साउंदै भन्यो ,’ लाग्छ नि सानी , धेरै धेरै लाग्छ तिम्रो माया तर माया लाग्छ भनेर जताततै पोख्दै हिंड्नु हुंदैन नि , हैन र ? ‘ बिकाशको आँखामा कताकता आँशु छचल्किएको थियो । उसले त मलाई चोखो माया साँचो अर्थमा गर्दोरहेछ । मैले पो बुझ्न नसकेको रहेछु उसको मायालाई । त्यसबेला मलाई आफ्नो उत्ताउलोपना देखेर एकैछिनको लागी आफैं संग एकैसाथ लाज र घिन लागेर आयो । मेरा आँखाभरी आँशु भरीए । त्यती धेरै जोश बोकेर विकाश संग यौन कृडामा लिप्त हुने अभिलाशा बोकेर आएकि मैले विकाश संग माफ माग्न पनि सकिनं । सायद उसले मेरो आँखाले गरिरहेको याचना बुझ्यो होला दुबै हातली मेरो दुबै गालामा भएको केशहरु पन्साउंदै लगेर कान मुन्तिर कसिलो गरेर समाई मेरो ओठमा चुम्बन गर्यो । मेरा हातहरु विकाशको पाखुरा मुनितिरबाट पिठ्युँमा पुगेर उसलाई कस्न खोज्दैथिए । चुम्बनको क्रम केहिबेर चलिरह्यो । हामीदुबै एक अर्काको क्रमश दुबै ओठहरु चुस्नेक्रममा थियौं । मैले आफ्नो तल्लो ओठ उसको दुबै ओठको बिचबाट फुस्काएर फुस्फुसाएको स्वरमा उस्लाई थ्याङ्क यु आई लभ यु भनें । उस्तै स्वरमा बिकाशले पनि आई लभ यु टु भनेर मेरो जिब्रो माग्यो । मैले आफ्नो जिब्रो उसको मुखभित्र छिराएं । बडो तन्यमताका साथ विकाशमेरो जिब्रो चुस्न लाग्यो । जिब्रो चुसाउनुको आनन्द मलै पनि भै रहेथ्यो । पालैपालो हामी एक अर्काको जिब्रो चुस्तै गर्दा बिकाशको हात मेरो स्तनमा खेल्न लागिसकेको थियो । मलाई केहि हिम्मत बढ्यो र अनुरोध गरें , ‘विकाश आज एक पटक सबै गरौं न प्लीज । ‘ हामी दुबै जिब्रो चुस्ने क्रममा तौलियामाथी लडिसकेका थियौं । अहिले बिकाशको मुख म्याक्सीबाट जबर्जस्ती बाहिर निस्किंदै गरेको मेरो दाईने स्तनमा थियो । यौटा हातले उसले मेरो घिचुकमा कपालको केश मुठ्याएको थियो भने अर्को हात मेरो योनि क्षेत्रतिर डुलाउंदै थियो । यस्तोबेलामा सायद शरिरलाइ दिमागले नियन्त्रणमा रख्न सक्दैन होला मेरो हात विकाशको घुँडासम्म आउने हनुमाने कट्टुभित्र पसेर कडा लिङ्ग संग खेल्न लागे । सानोमा देखेछोएको भएपनि जवानभएपछि कल्पना मात्र गरेको विकाशको लिङ्ग मेरो कल्पनामा झैं लम्बाई र गोलाईमा थियो । सानोमा उसिनेको सखरखण्डको त्यान्द्रो जस्तो देखिने बिकासको तुरी अहिले मेरो मुठ्ठीमा अटाई नअटाई थियो । मैले मुठ्ठीमा नापीरहेको उसको लिङ्ग मेरो योनिभित्र सम्म छिराउन पाएहुन्थ्यो जस्तो लागेर मैले पुन अनुरोध गरें तर मेरो अनुरोधको उल्टो असर परे झैं विकाश हठात मेरो शरिरबाट अलग भयो र मैले तानेर तल पुर्याईदिएको कट्टु माथी सार्दै बोल्यो , ‘ अहिले नै गर्ने र सानी? कोहि आए भने? ‘ म पनि अलि सम्हालिएर यताउता हेरें । त्यहां वरपर बाँधेका बाख्राहरु हामी के गरिरहेछौं भन्ने जिज्ञासा भएझै हामीलाई हेरिरहेका थिए । अलि पर्तिर मेरो घरको बोको विकाशको घरको पाठीमाथी उक्लेर डल्लो पर्दैथियो । ‘ को आउँछ र यहाँ ? ‘ मैले प्रतिप्रश्न गरें र उठेर एकै ठाउँ गुजुल्टिएको तौलियालाई फेरी सजिलो गरि ओछ्याउन थालें । तौलिया ओछ्याउनको लागि म आधा निहुरिएको अवस्थामा हुंदा पछिल्तिरबाट विकाश आएर उसको लिङ्ग मेरो योनिभागमा पर्ने गरी रगड्न थाल्यो । उसको दुबै हात मेरो स्तनमा खेल्न लागेका थिए । म घुंडा टेकेर उ भएतिर फर्किएं र उसको लिङ्ग हातमा खेलाउन थालें । मैले एकाध पटक ब्लु फिल्महरुमा केटीहरुले लिङ्ग चुसेको अनि केटाहरुले योनि चाटेको देखेको थिएं । अबेरै नगरी मैले विकाशको लिङ्ग आफ्नो मुख भित्र हालें र लालीपपझैं चुस्न थालें । ‘ अरे सानी , यो के गरेको ? ‘ विकाश भन्दैथियो । सायद उसले म यती अगाडी बढ्न सक्छु भन्ने सोचेको थिएन । केहिबेर सम्ममात्र विकाशको लिङ्ग मेरो मुखभित्र रगडिएको के थियो मैले आफ्नो किलकिलेमा तातो पानीको सिर्का महसुस गरें साथै विकाशको मुखबाट आह!!! को आवाज निस्किएको सुनें । क्रमश बिकाशको लिङ्गले भातको माड जस्तो बाक्लो तातो चिप्लो तरल पदार्थ छाड्न थाल्यो । उसको बिर्यको केहि भाग मेरो मुखभित्र के पसेको थियो मलाई वाकवाकी आयो । मैले विकाशको लिङ्ग आफ्नो मुखबाट बाहिर निकालें र उसको विर्य ओकलेर फालें । पुरानो जमानाको टेको कलमले झै छादीरहेको विकाशको लिङ्ग आफ्नो योनिमा छिराउन खोज्दैथिएं म । ‘ मलाई त भयो सानी ।’ बिकाश बोल्यो । उ पुरै स्खलन भै सकेको थियो । म भने प्यासी नै थिएं । विकाशले मलाई समाएर उत्तानो पारेर लडायो र आफु म माथी घोप्टो परेर चढ्यो । मेरो ओठमा एकपटक म्वाईं दिएर उ मेरो स्तनमा झर्यो र दुबै स्तनका मुण्टो क्रमश चुसेर फेरी उ मेरो योनि भागमा सर्यो र दुबै हातका बुढिऔंलाहरुले मेरो योनिको दुई गालाहरु च्यातेर मेरो योनि चाटीचुटी पारेर चुस्न थाल्यो । यौनकृयामा हामी मान्छेहरु पनि पशुहरु भन्दा कम कहाँ रहेछौं र ? बरु पशुभन्दा अझ तल झरेर हामी दुई रतीरागको धुँवा उडाईरहेथ्यौ । सायद पहिलो प्रयास भएर होला विकाश केहि छिट्टो स्खलित भएको थियो मेरो पनि हालत त उस्तै थियो । विकाशले च्याती च्याती मेरो योनि चुस्ता म पनि धेरै बेर कहाँ टिक्न सकें र ? बर्खेखेतको समाहा फुटेर लेदोपानी बगेझैं म पनि एकैछिनमा तौलियामाथी छ्यालब्याल भएर पोखिएं । केहिबेर सम्म हामी एकार्काको अँगालोमै बांधिईरहयौं र उठेर दुबै सम्हालिएर बस्यौ । ‘ विकाश हामीले गर्ने काम त गरेनौ नि ?’ मैले सोधें । ‘ के भयो त? गरेको भए तिम्रो यहाँ बच्चा हुन्थ्यो नि त । ‘ मेरो पेट सुम्सुम्याउदै विकाशले भन्यो , ‘ तिमी कुमारी आमा भयौ भने नि ? ‘ विकाशको कुरा ठिकै थियो । कुमारी आमा भएर घरपरिवारको छि छि र समाजको दुरदुर हुंदै सबैले थुकेको सम्झंदा त आज झैं प्रत्येक पटक यसैगरी उम्लिएको जवानी तौलियामै पोख्नपाए जाती हुन्छ जस्तो लाग्यो । निक्कै बेर पछि अर्को पटक ब्यवस्थित भएर ढाल सहित यस्तै भेटघाट गर्ने बाचा गरेर म घर फर्कें विकाशपनि आफ्नो बाटो गयो ।
Labels: Sex, कुमारी आमा - भाग १, नेपाली यौन कथा